चीन स्ट्रिंग घाव फिल्टर कार्ट्रिज निर्माता र आपूर्तिकर्ता | थोडा
फिल्टर कार्ट्रिजको यो श्रृंखला विशेष विशेष प्रदर्शन फाइबर सामग्री प्रयोग र विशेष उपकरणको साथ लगातार घुमाव द्वारा बनाइएको छ। प्वालको आकार जस्तै हनीसकमको कारण, यसलाई पनि हनीसकम फिल्टरहरू पनि भनिन्छ। उच्च-प्रदर्शन फाइबर स्थिर छ, अशुद्धियों precipitating बेवास्ता, फाइबर शेडिंग र फिल्टर विरूपण समस्या। स्टेनलेस स्टील केन्द्रीय ट्यूब संरचना उपकरण स्टार्टअप अघि तरल पदार्थ को प्रभाव सामना गर्न सक्नुहुन्छ।
यो फिल्टर अल्ट्रा-लामो ("० "; १ 177878 मिमी) हो, ठूला भर र ठूलो फोहोर समात्ने क्षमता उद्योगहरूमा लागू। स्टेनलेस स्टीलको केन्द्रीय ट्यूब संरचनामा कडा मेकानिकल शक्ति छ र फिल्टरलाई सक्षम बनाउँदा मूल अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि मूल आकार राख्न सक्छ। यो हुन सक्दछ। प्रत्यक्ष रूपमा विद्यमान फिल्टर उपकरणमा स्थापना गरियो, शेलको सट्टा वा परिमार्जन बिना।
Sea समुद्री पानी डिस्लिनेसनको पूर्व फिल्टर र ठूलो मात्रामा रिभर्स ओस्मोसिसको सटीक फिल्टरर;
Pain पेन्ट, कोटिंग्स, पेट्रोलियम, र रसायन उद्योगहरूको सटीक फिल्टर;
Elect इलेक्ट्रोनिक्स, माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स, चलचित्र, फाइबर, र रेजिन उद्योगहरूमा फिल्टरेशन;
Plants पावर प्लान्टहरूको लागि कम्पेन्सेट पानी र पानी आपूर्ति प्लान्टहरूको लागि प्रारम्भिक फिल्टर पानीको फिल्टरेशन;
Oval हटाउने रेटिंग: १.०, .0.० (μm)
◇ केन्द्रीय ट्यूब: SS304
◇ अधिकतम कार्य दबाव: ०.60० MPa, २१ डिग्री सेल्सियस
Connection फिल्टर जडान: शिकंजा
XPP-- ​​△ --H-- ○ - ☆ - △
हटाउने रेटिंग (μm)
75 .7575 "
पीपी लाइन + पीपी केन्द्रीय कोर
२. "" (mm 63 मिमी)
कपास + स्टेनलेस स्टील केन्द्रीय कोर Degreasing
”. ”" (११mm मिमी)
कपास + पीपी केन्द्रीय कोर डिग्री गर्दै
ग्लास फाइबर + स्टेनलेस स्टील केन्द्रीय कोर
पीपीएसएस + स्टेनलेस स्टील केन्द्रीय कोर
अघिल्लो: स्टेनलेस स्टील फिल्टर हाउसिंग
अर्को: ग्लास फाइबर झिल्ली फिल्टर कार्ट्रिज
फोल्डिंग स्टेनलेस स्टील फिल्टर तत्व
फार्मास्यूटिकल ग्रेड ०..45 माइक्रोन ptfe साथ .9 99..9 ...